काठमाडौंमा मास्क र सेनिटाइजरको कृत्रिम अभाव ! « Mero LifeStyle
काठमाडौंमा मास्क र सेनिटाइजरको कृत्रिम अभाव !
सुमित्रा लुईंटेल	|| 28 April, 2021
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ज्योतिनगरका दीपक राई आफूले नियमित प्रयोग गर्ने गरेको डेटोल सेनिटाईजर र मास्क सधैं स्थानीय पसलबाट किन्ने गर्थे । तर हालै किन्न जाँदा सो पसलमा ती सामान पाएनन् । त्यसपछि उनी महाराजगञ्जको भाटभटेनी डिपार्टमेण्ट गए । त्यहाँ उनले मास्क त पाए तर डेटोल सेनिटाइजर पाएनन् । त्यसपछि उनी कपनकै संखुवासभा मेडिकल गए । त्यहाँ पनि उनले आफूले खोजेको सेनिटाइजर नपाएपछि नेपाली ब्रान्डको सेनिटाइजर ह्यान्ड रब इन्सटेन्ट किनेर चित्त बुझाए ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या निकै तीव्र गतिमा बढिरहेकोले मास्क, सेनिटाइजर तथा अन्य औषधीय सामाग्रीको निर्यात कम गरेको छ । त्यसैले बजारमा भारतीय ब्रान्डका सेनिटाइजर र मास्कको अभाव भएको हुनसक्छ ।
नेपालमा थुप्रै ब्रान्डका राम्रा भनिएका सेनिटाइजर उपलब्ध छन् । तर पनि नेपालीहरु डेटोल, हिमालय, लाइफब्वाइ, डाबर लगायतका नाम चलेका भारतीय ब्रान्डको सेनिटाइजर नै मन पराउँछन् ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या निकै तीव्र गतिमा बढिरहेकोले मास्क, सेनिटाइजर तथा अन्य औषधीय सामग्रीको निर्यात कम गरेको छ । त्यसैले बजारमा भारतीय ब्रान्डका सेनिटाइजर र मास्कको अभाव भएको हुनसक्छ ।
मास्क र सेनिटाइजरको कृत्रिम अभाव
कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै बजारमा मास्क तथा सेनिटाइजरको कृत्रिम अभाव हुन थालेको छ । मास्क तथा सेनिटाइजर व्यवसायी सम्मान राई भन्छन् ‘भीडभाडमा हिँड्दा मास्क लगाउन तथा सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न सरकारले सुझाएपछि यसको अधिक खोजी भएको हो ।’
संखुवासभा फार्मेसीका सञ्चालक मनोज श्रेष्ठको भनाइ फरक छ । उनी भन्छन्, ‘सेनिटाइजर नेपालमा नै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ । चीनबाट मास्क पनि आयात भइरहेकोले मास्क र सेनिटाइजरको अभाव अहिलेसम्म भएको छैन ।
त्यस्तै अर्का मास्क तथा सेनिटाइजर व्यवसायीका अनुसार बेच्नलाई मंगलवारबाट मास्क पाइएको छैन । सेनिटाइजर पनि सोमबारसम्म पाइएको थियो तर अब के हुन्छ थाहा छैन । ती पसलेका अनुसार मास्क र सेनिटाइजरको कृत्रिम अभाव देखिन्छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै बजारमा मास्क तथा सेनिटाइजरको कृत्रिम अभाव हुन थालेको छ । मास्क तथा स्यानिटाइजर व्यवसायी सम्मान राई भन्छन् ‘भीडभाडमा हिँड्दा मास्क लगाउन तथा सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न सरकारले सुझाएपछि यसको अधिक खोजी भएको हो ।’
के भन्छन् उत्पादन कम्पनी ?
नेपालमा अहिले धेरै स्थानीय मास्क तथा सेनिटाइजर कम्पनी खुलेका छन् । वनस्थलीस्थित काठमाडौं ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक अन्जन सिंखडाका अनुसार उक्त कम्पनीले दैनिक २० हजार मास्क उत्पादन गर्छ । दुईसाता यता मास्कको खपत निकै बढीरहेको छ । उत्पादन भएका मास्क भारतमा समेत बिक्री हुने भएकाले नेपालमा थोरै अभाव सिर्जना भएको हुनसक्छ ।
विगत ४ महिनादेखि निकै कम खपत भएको ह्यान्ड रब इन्सटेन्ट सेनिटाइजर यसै साताबाट निकै बढेकोे हिमालयन हर्ब प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक तपशराज जोशीले बताए । ‘उत्पादन खर्चभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने कारणले पनि यसको उत्पादन उचित मात्रामा गर्न सकिएको छैन । त्यसैले, नेपाली ब्रान्डका सेनिटाइजरभन्दा बाहिरबाट आउने सेनिटाइजर बढी खपत हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
निषेधाज्ञाको हल्लापछि अहिले एक साताको बीचमा यसको माग ह्वात्तै बढेको छ । उत्पादन कम्पनीहरुले माग अनुसारको सेनिटाइजर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यस बीचमा नेपालमा सेनिटाइजरको प्रयोगकर्ता धेरै मात्रामा घटिसकेका थिए । निषेधाज्ञाको हल्लापछि अहिले एक साताको बीचमा यसको माग ह्वात्तै बढेको छ । उत्पादन कम्पनीहरुले माग अनुसारको सेनिटाइजर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आपूर्ति महाशाखाको भनाइ
हालको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु मास्क र सेनिटाइजर निष्पक्ष रुपमा आयात, निर्यात हुनुपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखा प्रमुख प्रेमकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा नै मास्क र सेनिटाइजरको उत्पादन भइरहेकाले पहिले जस्तो अभाव सिर्जना हुने स्थिति छैन । मास्क तथा सेनिटाइजर बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि सहज रुपमा आयात भइरहेको छ ।
व्यापारीहरुले मास्क र सेनिटाइजर लुकाएको पनि आंशका छ । ‘अहिले यस्तो अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव वा अनियमित कार्य भएको छ भने यसको अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागले जिम्मा लिएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अनियमित कार्य भएको भए वाणिज्य विभागले नै कानून बमोजिम कारबाही गर्नेछ ।’